Kwabaningi ushokoledi - umkhiqizo, enikeza injabulo. Mhlawumbe lena yiyona ndlela ngakho. Phela, nocezu ebabayo, ubisi noma ushokoledi esimhlophe angathuthukisa isimo semizwa yakho futhi wenze umhlaba ube enomusa futhi licace. Abaningi bangavuma ukuthi inkomishi isiphuzo esishisayo izinkinga uhambe endleleni futhi akazange kubonakale global ngakho. Ama-Aztec asendulo ayebiza ushokoledi ukudla wonkulunkulu. Kodwa lo mkhiqizo ezizokhuthaza ukukhiqizwa kwamangqamuzana endorphins - amahomoni injabulo. Nokho, lezi zimfanelo ushokoledi ezinhle kuphela, eyakhiwa imikhiqizo yemvelo. Ububanzi kwalo mkhiqizo libanzi, kodwa ngaso sonke isikhathi ukuthi uthola izinga uswidi. Ngakho lokho ushokoledi Kungcono ukuthenga futhi yini okumelwe siyibheke lapho ukhetha?
Ngokusho ososayensi, ukusetshenziswa njalo komkhiqizo eziningi ezincane ukugwema okuvela izifo ezithile. Nge ushokoledi kungavimbela ukuthuthukiswa komqondo kakhulu eminyakeni yokuguga. Ngaphezu kwalokho, ukuphathwa kungandisa ukukhiqizwa kwamangqamuzana egazi.
Cha cika ushokoledi. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuthola okuhle kukhona okuya ngasethunjini okwanele 25 kuphela amagremu komkhiqizo ngosuku. Ngenhloso zokwelapha kufanele futhi usebenzise ushokoledi okumunyu of high.
Ngokusho nangodokotela bababhekene nezifo zenhliziyo, ushokoledi uyakwazi esikhundleni ngokugcwele ikhofi. Lo mkhiqizo ewusizo kakhulu inhliziyo. Phela, cocoa aqukethe polyphenol. Lezi izinto nethonya elihle ku-uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi, kanye ukukhuthaza ukugeleza kwegazi. Futhi lokhu kubaluleke kakhulu. Phela, isimangaliso esifanayo kakhulu ukunciphisa umthwalo oyinhloko inhliziyo.
Namuhla emashalofini ezitolo eziningi ezitholakala ku abakhiqizi abaningi ushokoledi. Nokho, akubona bonke abathengi bazi umehluko phakathi umkhiqizo izinga. Ezinye awukudla sibizwe nangokuthi ushokoledi. ukhiye Master, okuholela isixazululo, - emaphaketheni. Ukuze uthenge chocolate ezinhle, kudingeka utadishe ngokucophelela kwengoma. Yiqiniso, abakhiqizi abaningi ukushicilela ukwaziswa okubalulekile ngamagama amancane. Kodwa-ke siyingxenye uzokwenza isinqumo esihle. Ngakho-ke kuwufanele umzamo ukuchitha extra imizuzu engu-15 ukuthenga chocolate yangempela kunokuba a esithengisa amaswidi Tile elula amnandi. Ngakho, yini okufanele aqukethe umkhiqizo?
Okuhle ushokoledi Ukwakheka yakhiwa cocoa ibhotela. Umkhiqizo akufanele kube namafutha confectionery. Uma ushokoledi iqukethe cottonseed, ubhekilanga, sayinela ukungena noma amafutha esundu, akudingekile oncamnce. abakhiqizi abaningi balwela ukukhipha umkhiqizo kwaba intengo ekhangayo esengeziwe abathengi. Lesi ngiso sizatfu sekufa we ungeze zamanani aphansi izinto zokusetshenziswa, okuyinto esikhundleni noma cocoa ibhotela okulingana.
esikhundleni Ilingana futhi
A chocolate ezinhle ziqukethe cocoa ibhotela. Abanye confectionery amafutha anamandla lokunye noma okulingana. Kufanele siqonde le miqondo emibili.
Ngu ikhemikhali okulingana izakhiwo esondelene kakhulu cocoa ibhotela. Nokho ukunambitha amaswidi equkethe ingxenye esebenzayo ilahlekelwa kakhulu umkhiqizo yemvelo. izinga ezinhle ushokoledi ngokushesha liyancibilika emlonyeni wakho, kusale a aftertaste nezimnandi. Lokhu ibangelwa cocoa ibhotela. Iphuzu ukuncibilika lo mkhiqizo 32 ° C.
Chocolate, lapho Ukwakheka has a okulingana cocoa ibhotela, liyancibilika ngokushesha emlonyeni. Nokho, ukunambitheka buzoba buncane okunoshukela uju akumnandi ngakho futhi unsaturated. Naphezu kwakho konke lokhu, yenziwe ngohlobo enjalo umkhiqizo unelungelo ukuba ngokuthi ushokoledi.
Uma ku uju of cocoa ibhotela sithathelwe indawo ukotini, amafutha yemifino, amafutha esundu, uwoyela soybean noma fat eleksan ke kukhona ukungabaza mayelana ubuqotho bayo. Akufanele sivumele ukunqotshwa izindaba abakhiqizi ababiza a chocolate mkhiqizo. Lena ezivamile amathayili confectionery. Lokhu uswidi ngeke zigcwale amanzi emlonyeni. Ukunambitheka lo mkhiqizo ikude ushokoledi yangempela. Inzuzo main confectionery Amabha - eziphansi.
Lecithin siyingxenye ye
Isikhathi esining impela ohlwini izithako, ungabona lecithin. Abaningi abazi ngisho ukwazi ukuthi iyini. A chocolate ezinhle sizoqukatha le ngxenye. Phela, lecithin iyasiza umzimba womuntu ngisho nezisemqoka. Le into kuqukethwe ulwelwesi zokuzivikela zobuchopho. Kuyaphawuleka ukuthi kwemisipha futhi ethukile amangqamuzana omuntu ngo-17% aqukethe lecithin. Nokho, okuningi yalolu ketshezi libhujiswa lapho ukucindezeleka ngokomzwelo nangokomzimba. Ukuntuleka kokukhulumisana lecithin ngokuvamile kakhulu kuholela ukucasuka njalo futhi babekhathele kakhulu. Uma ungenalo ubuyise izinqolobane zalo, kungaba kubi kakhulu kakhulu inkumbulo.
Uyini ushokoledi best ezimhlophe, ubisi noma ezibabayo
Namuhla ungakwazi ukuthenga cishe noma yikuphi ushokoledi. Kungaba abamhlophe, abansundu, ubisi, amakinati, izithelo ezomisiwe kanye amaswidi ahlukahlukene. Ukuze uqonde ukuthi ushokoledi kungcono, kubalulekile hhayi kuphela ukuqonda isakhiwo yayo, kodwa ukuqonda okucacile izingxenye umkhiqizo lokhu. Main Isithako - cocoa. Bakhonza indaba esemqoka eluhlaza womshini cocoa ibhotela, nokhokho oyimpuphu, nokunye. Imikhiqizo ambalwa yokuqala asetshenziselwa womshini ushokoledi samanje.
Umunyu ihlukile kwezinye izinhlobo okukhona ukunambitheka ocebile kanti iphunga esiyingqayizivele. Kuyinto ephawulekayo ukuthi lo mshumayeli ushokoledi ubhekwa ewusizo kakhulu. Umkhiqizo iqukethe semali tocopherol. Lezi izinto ukunikeza umqondo wenjabulo kalula. Ososayensi baye bafakazela ukuthi shokolethe kunciphisa ukukhathala uma ukucindezeleka engqondweni nasemzimbeni, kuthuthukisa kwegazi. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo kunomphumela tonic. Umthetho eziyisisekelo shokolethe - ke okungenani ushukela cocoa esiphezulu. Yilokhu ikuvumela ukuzwa obucayi ukunambitheka awukudla ezingenziwanga iphazanyiswe ubisi nezinye amanyela.
Oncibilikile kuyafana - kuba umkhiqizo ekahle izinyo elimnandi, kodwa hhayi kulabo bayakwazisa ukunambitheka esiyingqayizivele. Yiqiniso, lo mkhiqizo futhi kunezinzuzo zako. Oncibilikile has a ukunambitheka obucayi futhi umnene. Lezi izimfanelo lomkhiqizo ukunikeza ubisi ukhilimu. Kodwa inani elikhulu ushukela kwenza umkhiqizo sweet kakhulu.
Abantu abaningi bayamangala ngu ushokoledi esimhlophe. Ngokwezazi ezithile, lo mkhiqizo nje enhle. Kodwa lokhu akulona icala. Eqinisweni, okungcono chocolate white siqukethe izingxenye ezimhlophe: ukhilimu, ubisi, ukhokho ibhotela, ushukela nokunye. Lokhu amafutha uju, amnandi futhi anomsoco. Nokho, ushokoledi esimhlophe, futhi, wathola abalandeli babo.
Kuhle shokolethe ekhiqizwa eBelgium. Ngokokulandisa, njengengxenye izibiliboco ahlukahlukene kungekho yokufakelwa flavour, izithasiselo, NEZIVIKELAKUVUNDA. Chocolate-Belgian iqukethe izingxenye kuphela zemvelo, phakathi okuyinto - cocoa oludakayo, cocoa ibhotela nokunye. Zonke izithako of high. Kuyaphawuleka ukuthi okumunyu ushokoledi Belgian nge 72% cocoa mass siqukethe.
Cishe kuyo yonke imizi kuleli zwe has a kwemboni, onguchwepheshe ukukhiqizwa lesi sidlo. Ngaphezu kwalokho, ungavakashela esitolo encane lapho ukuthengisa ushokoledi ebabayo ngezandla. Phakathi brand edume kunazo ushokoledi Belgian wukunikeza:
Ezitolo ezivamile ushokoledi Belgian idayiswe, njengoba ayiqukethe nezivimbelakuvunda nezinye amanyela. Ukugcina umkhiqizo abanjalo kudinga izimo ezithile.
Switzerland lifaka yesibili kule simo abakhiqizi emhlabeni ushokoledi. Izibalo zibonisa ukuthi zonke izakhamuzi ngonyaka odla mayelana 12 khilogremu lesi sidlo. Phakathi sha Swiss ethandwa wukunikeza:
ushokoledi ezinhle Swiss senziwa ezimfundisweni eqolo. Njengengxenye okukhona akukho izithasiselo chemical noma nezivimbelakuvunda. Yingakho ushokoledi kugcinwa isikhathi eside. Ububanzi okukhona olusha e boutiques emhlabeni wonke njalo.
Gourmet ushokoledi kusukela France
France yasisenza ushokoledi okumnandi futhi eliphezulu. Kancane kancane, abenzi ushokoledi yaleli zwe kokuba isibambo abakhiqizi ezivela eBelgium naseSwitzerland. Kuyaphawuleka ukuthi uju French ayamangalisa hhayi kuphela ukunambitheka layo eliyingqayizivele, kodwa futhi inhlanganisela imikhiqizo. Abanye abakhiqizi ukuhlomisa isembozo candy kashokholethi nemishini ekhethekile yokuthungatha ukuthi silondoloze lokushisa elikhulu kanye nomswakama. Lokhu kukuvumela ukuba ugcine uswidi. Phakathi brand ethandwa French kufanele ezigqanyisiwe:
"Mma de Sevigne".
Kuhle ushokoledi Russian
The best chocolate Russian is oluqanjwe izinkampani ezifana:
okunezinhlobonhlobo inkampani "VK" libanzi. Lokhu umkhiqizi ukhiqiza umkhiqizo premium. Ukwakheka awukudla ezinjalo equkethwe 99%, 85%, 75% no-65% ushokoledi oludakayo.
Russian ushokoledi ifektri
Kuhle ushokoledi Russian senziwa Izimboni eziningana ebambe "United Confectioners":
imikhiqizo iqembu lokugcina Kugcizelela ne ukwehlukana kwayo zokunambitha izixazululo. Uveza ushokoledi ne izithasiselo ehlukahlukene: ginger, izithelo candied, amantongomane, izinhlamvu ze-sesame, amavithamini. Esikhathini ukukhiqizwa izinhlobo ezithile izibiliboco usebenzisa ushukela esikhundleni. ushokoledi Umunyu engenalo ukubunjwa yabo ukungcola kanye izithasiselo, iqukethe 75-87% cocoa oludakayo.
Ukukhathazeka "Red Okthoba" bekulokhu esikhiqiza amaswidi adumile brand "Inkazimulo." Umkhiqizo itholakala ifomu evamile futhi ukungena nakwamanye amazwe. Lokhu ushokoledi iqukethe mayelana 80% cocoa oludakayo.
Factory "Rot Front" ukhiqiza ezahlukeneyo ezintathu awukudla onesihloko esithi "Autumn Waltz", equkethe-56% cocoa, kanye:
tincetu Orange kanye notshwala.
The best oncibilikile, ebabayo noma elimhlophe, akunandaba, yakhiwa cocoa ibhotela. Lapho ukhetha okukhona, ukunakekelwa okukhethekile kufanele ikhokhwe nokubunjwa kwayo. Ushokoledi akuyona zemvelo zemifino amafutha kanye cocoa ibhotela esikhundleni. Umkhiqizo ingaqukatha okulingana yayo kuphela. Uma it has a esikhundleni, asikwazi ngokuthi ushokoledi. umkhiqizo okunjalo ubizwa ngokuthi confectionery tile.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi intengo okukhona kuyinto inkomba ayisihluthulelo izinga layo. Cocoa ibhotela esikhundleni kunganciphisa izindleko emkhiqizweni ozophuma. Ngokwemvelo, intengo yaleli ushokoledi lingaphansi kakhulu.
Kwemvelo kungaba "ujike grey" ngokuhamba kwesikhathi. Ukunambitha lokhu ushokoledi akuyona ezahlukene kusukela evamile. Uma uswidi embozwe "ushukela frost ', kuyobe ukunambitha ezibabayo. Uma yokwakheka umkhiqizo has lecithin, asikwazi singabaze angasetshenziswa. Le ngxenye Kubalulekile ukuhlinzwa evamile yomzimba womuntu. ushokoledi zenani elikhulu kakhulu - ezibabayo.
Esenzeka eminyakeni iskripthi 65 besilisa: 'Ukuzinikezela kuya umhlalaphansi'
Pyelonephritis: kuyini futhi indlela yokuphatha kulo?
-Google ihlolwe yokufakelwa intelligence DeepMind endaweni "Inkinga isiboshwa sika"